Soomaaliya oo Baarlamaan la'aan noqotay | KEYDMEDIA ONLINE
Soomaaliya oo Baarlamaan la’aan noqotay
Waxay qeyb ka tahay inuu dalka Baarlamaanka la'aan noqdo qorshaha Farmaajo ee awood aruursig, ee ku doonayo isaga kaliya inuu taliyo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dalka Soomaaliya ayaa galay firaaq ama marnaasho dhanka hay'adda sharci-dejinta kadib markii uu dhamaadey mudo-xileedka Baarlamaanka 10-aad oo ku ekayd shalay, 27-ka December.
Baarlamaanka oo markii horeba ahaa mid fashilmay, oo howlgab laga dhigay ayaa sameystay cusboonaysiin kaararka Xildhibaanada, iyagoo doonaya inay sii shaqeyaan xilli aysan haysan awood sharci ama mid dastuuri ah, oo wax ku meel-marin karaan.
Afartii sano ee uu shaqeynayay, tayo ahaan wuxuu noqday midkii ugu liitay, iyadoo ku milmay Xukuumadda, oo 75% Xildhibaanadda Wasiiro, ku-xigeenno iyo Wasiiru dowliyaal laga dhigay, si aysan u dhicin isla-xisaabtan.
Wuxuu sidoo kale ahaa Baarlamaanka mid kala qeybsan, oo aan wax wadashaqeyn ah ka dhaxayn labadiisa aqalka, kadib markii uu Farmaajo billaabey inuu Gollaha Shacabka u isticmaallo meel uu ku meel-marsado danihiisa gaarka, isagoo howlgab ka dhigay Aqalka Sare.
Ma muuqato rajo in Baarlamaanka 11aad dhawaan la doorto, waxay qaadan kartaa billlooyin ama sanado in xal laga gaaro khilaafka la xiriira doorashadda, oo Farmaajo ka tanaasuli la'yahay gudiyadda doorashadda ee uu sida musuq-maasuqa kusoo dhigay.
Baarlamaanka 10aad ayaa ku fashilmay dhameystirka dastuurka KMG ah, oo la doonayay in afti dadweyne lagu ansixiyo 2020, iyo qabashadda doorasho qof iyo cod ah, taasoo fashilkeeda uu sabab u yahay Farmaajo oo aan ka shaqeynin, isagoo waqtiga dowladda ku lumiyay khilaaf abuurid iyo duminta Maamulladii waqtiga badan la geliyay dhismahooda.